Amin’izao fotoana izao isika dia miresaka momba ny fanovana, ny fanavaozana ary ny fananganana. – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Voalohany dia noheverina ho “fomba mandalo” , avy eo dia noraisin’ny olona rehetra manana finday na solosaina finday amin’ny teny iray manontolo.
Tsaroako i Bill Gates tamin’ny resadresaka tao amin’ny David Letterman Show izay naneso azy satria nanazava ny atao hoe Internet sy ny fomba hanovana an’izao tontolo izao izy.
Bill: “[Ny Internet] dia lasa toerana ahafahan’ny olona mamoaka vaovao […], mandefa mailaka elektronika…”
Mpanadihady: “Roa volana lasa izay dia nisy ny fanambarana lehibe fa tao amin’ny Internet […] dia handefa lalao baseball izy ireo […] ary nieritreritra aho hoe “maneno lakolosy ve ny radio?” “…..
Bill: “Afaka mihaino azy ianao isaky ny tianao”
Mpanadihady: “Mampaneno lakolosy ve ny kasety?”
… sy ny sisa. Nampalahelo tokoa ny nijery, saingy nihomehy i Bill. Tsy miaraka aminy, fa ao aminy.
Fantatrao izay alehako amin’ity, fa tiako hazava tsara izany.
Mino amim-panetren-tena aho fa isaky ny misy fanavaozana lehibe tafiditra dia matahotra ny olona.
Hiezaka hiaro ny sata misy ny olona satria mampatahotra ny olona ny “fiovana”. Ny fiovan’ny asa, ny fiovan’ny trano, ny fiovan’ny mpiara-miasa (lol) dia fahatsapana mampatahotra satria nomanina mba hikatsaka fiarovana sy hijanona ao amin’ny faritra mampionona antsika.
Raha nahita lava-bato tsara ny razambentsika, misy loharanon-tsakafo be dia be, dia tsy mila “miala amin’ny faritra mampionona azy” izy ireo ary miady amin’ny liona sasany mba hahazoana ny sakafo manaraka.
Mampatahotra ny fiovana ary sarotra takarina ity teknolojia ity. Ny olona sasany dia miezaka ny hahatakatra izany, fa tena sarotra toy ny helo. Efa an-taonany maro aho no teto amin’ity sehatra ity ary mbola mianatra zava-baovao isan’andro.
Mekanisma marimaritra iraisana vaovao, karazana sakana samihafa, mpanamarina, delegasiona, mpitrandraka harena ankibon’ny tany, manana taham-pahavitrihana, famporisihana, oracle, sns sns. Arakaraky ny hianaranao no hianaranao bebe kokoa ary ny fahatsapanao fa mbola betsaka ny tokony hianarana.
Izany no ilazana fa ny ankamaroan’ny olona dia hanala azy fotsiny satria tsy te hampiasa ny herin’ny atidoha izy ireo hahatakatra izany.
Avelao aho hanazava izany: tsy maninona raha tsy te hianatra izany. Tsy fantatro ny fomba fiasan’ny mailaka nefa mampiasa azy ireo isan’andro aho.
Tsy haiko ny fomba fiasan’ny Internet ary mbola ampiasaiko isan’andro.
Mitovy amin’ny antso an-telefaona, hafatra an-tsoratra, fahitalavitra, sns.
Izany hoe, mila fotoana ny zatra amin’ny teknolojia vaovao ary izany no mahatonga ny olona hikorontana.
Ny ankamaroan’ny olona dia hanaisotra izany fotsiny satria tsy tiany ny zavatra tsy azony, mandra-pahatsapany fa afaka manomboka mampiasa ny teknolojia izy ireo nefa tsy mahafantatra ny ao ambadik’izany.
Mino aho fa mbola aloha isika. Amin’izao fotoana izao dia sarotra ho an’ny mpampiasa salantsalany ny mametraka kitapom-bola, manoratra ny fehezan-teny voa, miditra amin’ny protocols ara-bola itsinjaram-pahefana, $AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve, avy eo mitady ny mpamatsy staking mety, avy eo mandefa famantarana eo anelanelan’ny poketra sns.
Satria amin’izao fotoana izao dia tsy natao hiantsoana olona an’arivony tapitrisa izany, ary zavatra tsara izany. Zavatra tsara izany satria rehefa manomboka mifantoka amin’ny fifantohana amin’ny mpanjifa sy ny traikefa ny orinasa dia maniry ny ho anisan’izany ny rehetra.
Teraka amin’ny blockchain ny orinasa vaovao, homena serivisy vaovao. Ny Web3 dia momba ny fanovana ny fahefana avy amin’ny orinasa lehibe mankany amin’ny mpampiasa ary mitranga eo imasontsika izany.
$BTC sy $ETH dia tsy fampiasam-bola 1 taona. Ireo teknôlôjia ireo dia hanova izao tontolo izao araka ny fahafantarantsika azy ary hahita fanoherana avy amin’ireo olona izay mahazo tombony be indrindra avy amin’ny tontolo mifototra amin’ny fisondrotry ny vidim-piainana.
Vonona ny hivarotra sy hampiasa vola amin’ny crypto voalaza etsy ambony aho mandritra ny folo taona manaraka ary mety ho mihoatra izany aza.
Miaraka amin’izany rehetra izany, tsy mitovy ny crypto rehetra, toy ny tsy mitovy ny tahiry rehetra.
Ny fampitahana ny BTC amin’ny TurtleCoin dia toy ny fampitahana ny $TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) amin’ny Theranos. Ary misy antony tsy ananan’i Theranos ny mari-pamantarana.
Mipetaka 3 sosona, satroka dada, tsihy ambony latabatra, saron-tava ho an’ny ankizy, andriamby, satroka baseball, pad’alika, tsihy alika, bandana biby, bodofotsy biby, tsihy saka, T-shirt mavitrika, T-Shirt Baseball ¾ tanany, T-Shirt Classic , T-Shirt sary, Hoodie maivana, T-shirt maivana, T-shirt lava, T-shirt lava, T-Shirt Premium, Hoodie Pullover, Sweatshirt, Racerback Tank Top, Top tsy misy tanany, T-Shirt tena ilaina, Tank Top, Tri -T-shirt mifangaro, T-Shirt V-neck, Hoodie misy zipo, Akanjo A-Line, Top Chiffon, T-Shirt scoop, T-shirt mipetaka, T-shirt V-neck mipetaka, Akanjo T-Shirt grafika, Leggings , Skirt mini, T-shirt scoop Premium, T-shirt milamina tsara, Sticker, Sticker manjelanjelatra, Hoditry ny solosaina, Sleeve laptop, Sticker mangarahara, hoditra iPad, iPad Snap Case, hoditra iPhone, iPhone Snap Case, iPhone Soft Case, iPhone Henjana Case, Wallet iPhone, Samsung Galaxy Skin, Samsung Galaxy Snap Case, Samsung Galaxy Soft Case, Samsung Galaxy Tough Case, Art Board Print, Art Print, Canvas Mounted Print
Tags: AEDAfghan AfghaniAFNAlbanian LekALLaltcoinaltcoinsAlzeriana DinarAMDANGAngole KwanzaAOAArmeniana DramARSAruban FlorinArzantina PesoAUDAustralie DollarAWGAzerbaijani ManatAZNBahamian DollarBahraini DinarBalboa PanameanaBAMBangladeshi TakaBarbadian DollarBBDBCHBDTBelarosiana RubleBelize DollarBermudan DollarBGNBHDBhutanese NgultrumBIFBinance USDBirr EtiopianabitcoinBitcoin CashblockchainBMDBNDBOBBoliviano bolivianoBosnia-Herzegovina Convertible MarkBotswana PulaBRLBrunei DollarBSDbtcBTNBurundi FrancBUSDBWPBYNBZDCADCambodian RielCanadian DollarCape Verdean EscudocashCayman Islands DollarCDFCedi GhanaCFA Franc BCEAOCFA Franc BEACCFP FrancCHFChilean PesoChilean Unit of Account (UF)Chinese YuanCircle USD CoinCLFCLPCNYcoinColón Costa RicanCOPCRCcryptocryptocurrencie scryptocurrencycryptopunksCUPCVECzech KorunaCZKDAIDalasi GambianaDanoà KroneDenar MasedonianinaDinar IrakianaDJFDjiboutian FrancDKKDOGEdogecoindolara amerikanaDolara JamaikanaDollar FijiDollar US GeminiDominikana PesoDong VietnameseDOPDZDEast Caribbean DollarEGPEgyptiana PoundETBethetherethereumEUREurozone Eurofampiasam-bolafitrandrahana harena ankibon'ny tanyFJDFKPForint HongroàFranc ComorianFranc KongoleyFranc RwandaGBPGELGHSGibraltar PoundGineana FrancGIPGMDGNFGTQGuarani ParaguayanGuatemalan QuetzalGUSDGuyanaese DollarGYDHaitian GourdeHKDHNLhodlHonduras LempiraHong Kong DollarHRKHryvnia OkrainianaHTGHUFIDRILSINRIQDIRRISKJEPJersey PoundJMDJODJordaniana DinarJPYKazakhstani TengeKenyan ShillingKESKGSKHRKina papouasie-nouvelle-guinéeKiobàna PesoKMFKPWKróna IslandyKRWKuna KroasiaKuwaiti DinarKWDKYDKyrgystani SomKZTLAKLaotiana KipLari GeorgianaLBPLesot ho LotiLev BulgarianLibaney PoundLiberian DollarLibyan DinarlitecoinLKRLRDLSLltclydMacanese PatacaMADMalagasy AriaryMalawian KwachaMalaysian RinggitMaldivian RufiyaaMaraokana DirhamMauritanian OuguiyaMauritian RupeeMDLMexican PesoMGAMKDMMKMNTMoldova LeuMongoliana TugrikMOPMozambikana MeticalmpivarotraMRUMURMVRMWKMXNMyanmar KyatMYRMZNNADNamibian DollarNepaley RupeenerdNetherlands Antillean GuilderNew Taiwan DollarNew Zealand DollarNGNNicaraguan CórdobaNigerian NairaNIONOKNorvezy KroneNosy Solomon dolaraNPRNuevo Sol PerovianaNZDOmani RialOMRPABPakistani RupeePAXPaxos Standard USDPENPeso FilipinaPeso KolombianaPeso OrogoaianaPGKPHPPKRPLNPound Islands FalklandPound SterlingPYGQARRand Afrikana TatsimoReal BrezilianaRial IranianaRial QataririppleRomaniana LeuRONRSDRUBRuble RosianaRupia indianaRupiah IndonezianaRWFSaint Helena PoundSalvadoran ColónSamoan TalaSão Tomé ary Príncipe Do brasarsatoshisatoshi nakamotoSaudi RiyalSBDSCRSDGSEKSerba DinarSeychellois RupeeSGDShekel IsraelianaSHIBShiba InuShilling OgandaSHPSierra Leone LeoneSingapore DollarSLLSom uzbekistánSomali ShillingSOSSRDSri Lanka RupeeSTNSudanese PoundSuriname dollarSVCSwazi LilangeniSwedish KronaSwiss FrancSYPSyrian PoundSZLTajikistani SomoniTanzaniana Shillingteslatesla motorsThai BahtTHBTJSTMTTNDTongan Pa?angaTOPTrinidad sy Tobago DollarTRYTTDTunisian DinarTurkish LiraTurkmenistani ManatTWDTZSUAE DirhamUAHUGXUSDUSDCUYUUZSVanuatu VatuvarotraVenezoeliana Bolívar SoberanoVESVNDvolavola cryptoVolafotsy (troy ounces)Volamena (troy ounces)VUVWBTCWon Koreana TatsimoWon Koreana TavaratraWrapped BTCWSTXAFXAGXAUXCDXOFXPFxrpYemeni RialYen JaponeyYERZambian KwachaZARZimbaboeana dolaraZloty PoloneyZMWZWL
Next Illum qed nitkellmu dwar il-bidla, l-innovazzjoni u l-adozzjoni.
Previous ഇന്ന് നമ്മൾ മാറ്റം, നവീകരണം, ദത്തെടുക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.